Blue Sea – Page3– Media and Entertainment
တစ်​တန်​ကို ​ဒေါ်လာ ၆၀၀၀​ကျော်​တန်​တဲ့ငြုပ်​​ကောင်း
blueseaskt | April 30, 2019
ငြုပ်ကောင်းဟာ နိုင်ငံခြား ဈေးကွက်မှာတော့ တစ်တန်ဒေါ်လာ ၆၀၀၀ အထက်ဈေး ပေါက်ပါတယ်။ နှစ်ရှည်ခြံတွေက အပင်တွေပေါ် တင်ပေးလည်း ရပါတယ်။ ကွမ်းစိုက်သလို တိုင်ထောင်စိုက်လို့လည်း ရပါတယ်။ ငြုပ်ကောင်းပင်(Pepper plant) ************ ငြုပ်ကောင်းအစေ့ဟာလည်း ဆေးဖက်ဝင်သလို ဟင်းခတ်အမွှေးအကြိုင်အဖြစ်လည်း အသုံးပြုကြပါတယ်။ ငြုပ်ကောင်းကို အိန္ဒိယ နှင့် ဗီယက်နန် နိုင်ငံများတွင် စီးပွားဖြစ် အများဆုံး
blueseaskt | April 29, 2019
နေဗီယာအကြောင်းသိကောင်းစရာ နေဗီယာမြက်ဟာ ကြံပင်လိုလို၊ပြောင်းဖူးပင်လိုလို အပင်ကြီးမျိုးဖြစ်ပြီး တိရစ္ဆာန်တွေကိုကျွေးရင် သာမန်မြက်ထက် (၂-၃)ဆကြီးထွားနှုန်းမြန်တဲ့ မြက်မျိုးဖြစ်ပါတယ်။ အပင်ရဲ့အရှည်နှုန်းက ရေမြေသဘာဝမျှတမယ်ဆိုရင်တစ်ရက်ကို တစ်လက်မထိ အပင်ရှည်ပါတယ် ရိုးရိုးမြက်တွေမှာ အသားဓာတ် (၅)%သာပါဝင်ပြီး နေဗီယာမြက်မှာတော့ အသားဓာတ် (၁၁-၂၀)%ထိပါဝင်ပါတယ်။ ထူးခြားတာက တစ်ခါစိုက်ပြီး ပြုစုနိုင်ရင်အနည်းဆုံး(၈)နှစ်လာက် ရိတ်သိမ်းနိုင်တဲ့အတွက် ကုန်ကျစရိတ်သက်သာတဲ့ မြက်မျိုးဖြစ်ပါတယ်။ ကျွဲ၊နွား၊သိုး၊ဆိတ်၊ဝက်အစရှိတဲ့ တိရစ္ဆာန်တွေကို ကျွေးမွေးနိုင်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင်
မီးမရှိတဲ့ ဒေသတွေမှာ အသုံးပြုနိုင်မယ့် မြေအိုးရေခဲသေတ္တာ
မီးမရှိတဲ့ ဒေသတွေမှာ အသုံးပြုနိုင်မယ့်မြေအိုးရေခဲသေတ္တာ သီးနှံတွေကို မညှိးနွမ်းစေပဲ ရက်ပေါင်း ၂၀ လောက် ထားနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့် မီးမရသေးတဲ့ ကျေးလက်ဒေသတွေအတွက် အဆင်ပြေစေနိုင်ပါတယ်။ ” မြေအိုးရေခဲသေတ္တာ ပြုလုပ်နည်း ” 👉 အရွယ်မတူတဲ့ မြေအိုး ၂ လုံး 👉 သဲနဲ့ 👉 ရေပဲ လိုအပ်ပါတယ်။ ပထမဦးဆုံး မြေအိုးအကြီးထဲကို
ရုပ်ရှင်ရိုက်ဖို့ ဟောလီးဝုဒ်ကိုသွားရတော့မယ့် ကလေးသရုပ်ဆောင်မလေး ဧမာနွေလ … ————————————————– ဆိုရှယ်မီဒီယာ အသုံးပြုကြတဲ့ မြန်မာတွေနဲ့ ဟာသသရုပ်ဆောင် ကလေးမလေး ဧမာနွေလဟာ မစိမ်းလှပါဘူး။ အသက်ငယ်သေးပေမဲ့ မျက်နှာအမူအရာ၊ စကားအပြောအဆိုတွေကြောင့် သူမရဲ့ ရယ်စရာ ဗီဒီိယိုဖိုင် အတိုလေးတွေကို လူတော်တော်များများက ကြိုက်နှစ်သက် ကြပါတယ်။ အခုဆိုရင် နိုင်ဂျီးရီးယန်းလူမျိုး ဟာသအနုပညာရှင် အမျိုးသမီးလေးဧမာနွေလဟာ အမေရိကန်ရုပ်ရှင်စတူဒီယို
“ငါတို့လမ်းခွဲရအောင်” … 😂 “အင်း”ဟုတ်ပီဆိုပီး ပြုံးပြလိုက်တယ် 🙂 ဘာကြောင့်လဲ? မမေးဘူး ! လုံးဝနော် မမေးဘူး 😂 မလုပ်ပါနဲ့… မပြောဘူး !ငါပြုံးပြုံးလေးပဲနေနေမယ်? အရာအားလုံးထက် သူ့ကို မြတ်နိုးတဲ့သူကိုမှ မချစ်ရင် ဘယ်သူ့ကို ချစ်ချင်လဲ ပြောလေ… 😂 ပြောပါ ဦးနှောက်မပါဘဲ သူ့အတိတ်တွေ သူ့အကြောင်းတွေ ပိုင်ဆိုင်မှု
လူငယ်စစ်တုရင်ပြိုင်ပွဲ ကမ္ဘာ့ချန်ပီယံဆုရခဲ့တဲ့ ဝင်းထွန်းရဲ့ အိမ်အပြန်ခရီ
blueseaskt | April 28, 2019
လူတော်တွေကို ဥပေက္ခာပြုတဲ့နိုင်ငံ ——————————– လူငယ်စစ်တုရင်ပြိုင်ပွဲ ကမ္ဘာ့ချန်ပီယံဆုရခဲ့တဲ့ ဝင်းထွန်းရဲ့ အိမ်အပြန်ခရီးးတဲ့ ကြိုဆိုမယ့်သူ သူ့မိန်းမပဲရှိတယ် နိုင်ငံတော်အလံကိုရင်ဘက်ကြီးပေါ်တင် ပြည်ထောင်စုကိုကိုယ်စားပြု နိုင်ငံတကာနဲ့ယှဉ်ပီးဆုရလာတဲ့သူကြတော့ ဘယ်ခွေးတကောင်မှ ဆုတွေချမယ့်သူမရှိဘူး ဘာမှမဟုတ်တဲ့ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုပဲကိုယ်စားပြုတဲ့ပြိုင်ပွဲကြတော့ ပေးလိုက်ကြတဲ့ဆုတွေ။ ဂုဏ်ယူပါတယ်ညီငယ်…. #MyoeThet #drsma
ဘားအံက မိတ်ဆွေတွေအတွက် ထီ့လောင်စူးရေတံခွန်လမ်းညွှန် —————————————————– ဘားအံကနေ ဘုရားသုံးဆူမြို့ကို အချိန်တိုတိုလေးနဲ့သွားလို့ရပါတယ်… ဘားအံကနေဆို ၄ နာရီ စွန်းစွန်းလေးပဲမောင်းသွားရလို့ နေ့ချင်းပြန်သွားချင်ရင်လည်း အဆင်ပြေတယ်ခင်ဗျ… ကားမောင်းနှေးရင်တော့ ၅ နာရီလောက်တော့ကြာပါတယ်… ကားဆရာပေါ်ပဲမူတည်တယ်နော်… ကျွန်တော်ကတော့နာရီမှတ်ထားတာ ဘယ်မှမရပ်ရင် ၄ နာရီ စွန်းစွန်းပဲ… ဘုရားသုံးဆူမြို့အနီး မက္ကသာရွာ တောထဲမှာတည်ရှိတာဆိုတော့ အစားအသောက်ကို စိတ်ပူကြမှာပဲ… ရှားမူလာ
လိုအပ်တဲ့ သူတွေ အသေအချာမှတ်သားထားကြပါနော် စေတနာနဲ့ ပါ စက်​​ရေတွင်းတူက မှတ်​ထားကြ 🌿🌿🌿🌾🌲🌲🌲🌾🌿🌿🌿 စက်​​ရေတွင်းတူရာ၌ ​ရေ-ရှိ,မရှိ၊ ​ရေ-နည်း,​ရေများ ခန့်​မှန်​သိရှိနိုင်​ပုံ​လေးကို ဗဟုသုတအ​နေဖြင့်​ မျှ​ဝေ​ပေးပါမည်​။ ​ရေ-ရှိ/မရှိ 💥💥💥💥 ၁။ အရွက်​အမြဲတမ်း ရှိ​နေတတ်​​သော အုန်းနှဲပင်​၊ မယ်​ဇလီပင်​၊ မြက်​ စသည့်​အပင်​များ စိုစို​ပြေ​ပြေ လန်းလန်းဆန်းရှိ​နေပါက ထို​နေရာတွင်​ ​ရေရှိသည်​ဟု မှတ်​ယူနိုင်​၍
စင်္ကာပူကို ကြက်​ဥ​ ၊ ဘဲဥ​တွေ ယူမိရင်​ ဒဏ်​​ငွေ အပြင်​ ​ထောင်​ဒဏ်​ပါ ကျနိုင်​​ကြောင်း သတင်း​ကို​တွေ့​တော့ မချိပြုံး ပြုံးမိတယ်​..။ …………………………………… စိုက်​ပျိုး​ရေး ​ဆေး ​ရောင်းသူကျွန်​​တော်​ဟာ ပရဟိတအလုပ်​​တွေနဲ့ တစ်​နိုင်​ငံလုံး ​ခြေဆန့်​မိတဲ့အခါ ​ဒေသ​ပေါင်းစုံက စိုက်​ပျိုး​ရေးအ​ခြေအ​နေ​လေး​တွေကို ဂရုစိုက်​ပြီး ကြည့်​မိတယ်​..။ ကယန်း​ဒေသ​မှာ အဓိကထွက်​ကုန်​ဟာ ငရုတ်​သီးဖြစ်​ပါတယ်​။ ဘ၀တစ်​​လျှောက်​ စားဖူးသမျှ
တစ်ကိုယ်တည်း ၁။ ရယ်ပါ…တစ်လောကလုံး သင်နှင့်အတူ လိုက်ရယ်လိမ့်မယ်၊ ငိုရင်တော့ သင်တစ်ယောက်တည်းပဲ ငိုရလိမ့်မယ်။ ၂။ သီချင်းဆိုပါ…. တောင်တန်းတွေက ပဲ့တင်သံ ပြန်လာလိမ့်မယ်၊ သက်ပြင်းချရင်တော့ လေထဲမှာပျောက်သွားလိမ့်မယ်။ ၃။ ပျော်စရာအသံကို ပဲ့တင်သံက ပြန်ကန်ပေးပါတယ်၊ သောကတွေ ဒုက္ခတွေကိုတော့ သူပြန်မကန်ပေးဘူး၊တွန့်ဆုတ်သွားလိမ့်မယ်။ ၄။ ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နေပါ…လူတွေက သင့်ကိုတွေ့အောင် ရှာလိမ့်မယ်၊ ၀မ်းနည်းနေရင်တော့ သူတို့
ထိုင်ရင်း အောင်မြင်ချင်တဲ့ ငတုံးများ
ရန်ကုန်လေဆိပ်တွင် လေယာဉ်တစ်စီး လမ်းချော်၍ လေယာဉ် ၃ ပိုင်းကျိုးပြီး လေယာဉ်မှူး ဒဏ်ရာရ၊ ပြေးလမ်းပိတ်ပြီး ခရီးစဉ်များ ရွှေ့ဆိုင်းဖျက်သိမ်း
ကချင်ပြည်နယ် ပန်ဝါဒေသ တွင်​ တရုတ်​များ အတင်းအဓမ္မဝင်​​ရောက်​​နေ
တစ်သက်မှာတစ်ခါ ကြုံတောင့်ကြုံခဲထူးထူးခြားခြားကျင်းပတဲ့ဘုရားပွဲကိုရုပ်ရှင်အဖွဲ့သားတွေနဲ့ အတူရောက်ရှိခဲ့တဲ့ဦးကျော်သူ